Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta Drivers na Linux Mint 20 - LinuxCapable
October 28, 2021 October 25, 2021 by Jọshụa James
Nkuzi na-esonụ ga-akụziri gị otu esi etinye Nvidia Beta Graphic ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ maka Linux Mint 20.
Nkuzi a na-eji nrụnye ọkọlọtọ nke Linux Mint desktọpụ. Nke a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ndị ọrụ nwere njikwa ngosi ọzọ ma ọ bụ gburugburu desktọpụ, yabụ gbaa mbọ kwado faịlụ ọ bụla dị mkpa tupu ịmalite.
Na ndabara, DKMS edeghị aha na isi mmalite kernel. Nke a bụ nhọrọ mana akwadoro.
họrọ Ee ma ọ bụ mba na see Tinye igodo. Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka, họrọ EE.